Go’aanka uu qaatay Dembélé oo CAQABAD ku ah in Barcelona ay dib u soo ceshato Neymar Jr – Gool FM
Go’aanka uu qaatay Dembélé oo CAQABAD ku ah in Barcelona ay dib u soo ceshato Neymar Jr
(Spain) 16 Agoosto 2019. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa lagu wadaa inuu markale dib ugu laabto garoonka Camp Nou, sida ay xaqiijinayaan maanta oo Jimco ah wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Faransiiska.
Wargeyska “L’Equipe” ee dalka France ayaa qorey in agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG ee Leonardo uu codsaday in Ousmane Dembélé uu qeyb ka noqdo heshiiska uu Neymar ugu wareegayo Barcelona.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi uu si weyn ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka Ousmane Dembélé.
Sidoo kale xiriirka u dhexeeya Ousmane Dembélé iyo macalinka PSG ee Thomas Tuchel ayaa ah mid aad u wanaagsan maadaama ay horey uga soo wada shaqeeyeen naadiga Borussia Dortmund.
Laakiin Ousmane Dembélé ayaa u sheegay kooxda PSG inuu ku faraxsan yahay xiisaha ay ka muujinayaan adeegiisa, laakiin uusan dooneynin inuu ka tago Barcelona suuqan xagaaga.
Yeelkadeeda, Neymar Jr ayaa u sheegay mas’uuliyiinta PSG inuu doonayo ka tagista garoonaka Parc des Princes, isagoo dhowr jeer ee horey muujiyay sida uu u doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona.
Frenkie de Jong oo ka hadlay isbar-bardhiga xidigaha Lionel Messi iyo Van Dijk